Xildhibaan C/weli Qanyare oo iska fogeeyay eedeymo dil ah oo ilaaladiisa loo soo jeediyay | Baydhabo Online
Xildhibaan C/weli Qanyare oo iska fogeeyay eedeymo dil ah oo ilaaladiisa loo soo jeediyay
Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa wuxuu beeniyay in ilaaladiisa ay ka dambeysay dilka nin dhalinyaro ahaa, oo bishii hore ee May loogu gaystay Wadada Shaqaalaha ee Magaalada Muqdisho.
Ninkan oo ahaa wade mooto bajaaj, ayaa xilli habeen ah waxaa lagu dilay Wadada Shaqaalaha, xilli sida la sheegay uu mashquul badani ka jiray wadadaasi.
Aabaha dhalay marxuumka, ayaa waxaa uu sheegay in askari ka tirsan ilaalada Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare, uu ka dambeeyay dilka wiilkiisa.
Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare, ayaa waxaa uu si adag uu u beeniyay dilka lagu soo eedeeyay ilaaladiisa, laamaha ammaankuna looga baahan yahay in ay si wanaagsan u baaraan kiiskaasi.
“Wax anaga aan shaqo ku leenahay maaha, naloomana saarin karo. Waxaa laga rabaa ciidamada ku shaqada leh arrintaasi, in ay dib u baaraan, si fiicana u baaraan.” Ayuu yiri Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare.
Mar la weydiiyay sida ay ku soo gaartay eedeymaha loo soo jeediyay ilaaladiisa, ayuu sheegay inuu ka maqlay Warbaahinta, isagoo xusay in laamaha ammaanku ay wax ka weydiiyeen dilka ninkaasi.
“In leegu eedeeyay hadde waaba la’ogyahay, wax raadiyaasha ka baxayo’ oo meelkasta laga sheegayo weeye. Ciidamada ay khuseysana arrintaas waxbey naga weydiiyen, wixii aan ka ogeyna waa loo sheegay, baaritaankana weli waa socdaa.” Ayuu yiri Mudanaha Baarlamaanka Somaliya ka tirsan.
Xildhibaan Qanyare oo la hadlay Idaacadda Risaala, ayaa yiri “Arrin baaritaankeeda uu socdo lama keeno karo, oo Warbaahinta maxkamad loogama dhigi karo. Marka waa arrin baaritaankeeda uu socdo, oo nidaamkuna uu xaqiijinayo, anagana nidaamkaa ku kalsoonahay, wax dhiba ma qabno.”
Qoyska wiilka la dilay, ayaa waxay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ka codsadeen in cadaaladda la horkeeno cidii dishay wiilkooda.